Hadda waxaad shaqaalayn kartaa Movistar TV adigoon noqon macmiil Telefónica ah. | Wararka IPhone
Toni Cortés | | Noticias, dhowr
Telefónica waxay ku dhawaaqday barnaamijkeeda fiidiyowga dhowr bilood ka hor Movistar + Lite y durba waa xaqiiqo. Shirkadda Isgaarsiinta Isbaanishka waxay ogaatay in si ay ula tartanto inta ka hartay adeegyada TV-yada casriga ah ee OTT sida Netflix ama HBO, ay ahayd inay u furto diiwaangelinteeda dadweynaha guud, horayna way u sameysay.
Ugu dambeyntii, Mar dambe uma baahnid inaad ka mid noqotid macaamiisha Telefónica inay awood u yeelato inay qandaraas ku hesho oo keliya barnaamijkeeda maqalka. Hadda waxaad ka daawan kartaa barnaamijyada telefishanka Movistar ee taleefannadaaga iPhone ama iPad siddeed euro bishii.
3 Khadka taleefanka gacanta ayaa lagu daray
5 Tayada sawirka
6 Soo dejiso oo gadaal ka daawo
7 Ipad iyo iPhone, haa. Apple TV, maya
8 La wadaag xisaabta
Waxay leedahay qiimo aad u tartan badan marka loo eego tartanka. Sideed euro bishii, waxaad haysataa dhammaan mawduuca mawduuca. Joogto la'aan, oo leh mudo tijaabo bilaash ah oo hal bil ah, iyo waliba, oo ay kujirto qadka moobaylka qiimaha.
Qof kasta ayaa kireysan kara Movistar + Lite. Looma baahna mar dambe in laga noqdo macmiil taleefan oo leh adeegyadeeda taleefan ee go'an si loogu raaxeysto barnaamijkeeda telefishanka.
Khadka taleefanka gacanta ayaa lagu daray
Movistar wuxuu ka faa'iideysanayaa inuu noqdo wade taleefan, wuxuuna ka dhex muuqdaa barnaamijyada telefishanka ee intiisa kale oo ay ku jiraan khadka taleefanka gacanta ee khidmadda, oo aad isticmaali karto ama aadan isticmaali karin. Haddii aad rabto inaad diiwaangeliso, waa inaad tagtaa dukaanka Movistar halkaas oo ay ku siinayaan kaarka SIM-ka ah iyo nambarka moobiilka. Qiimaha adeeggu ma ahan wax la yaab leh, laakiin waxaad u isticmaali kartaa si dhammaystiran khad dheeri ah, maadaama aysan micnaheedu ahayn kharash bille ah oo go'an.
Qiimaha wicitaanku waa 0 senti / daqiiqo, laakiin iska jir, oo leh a 40 boqolkiiba aasaasida wicitaanka. SMS kasta wuxuu ku kacayaa lacag dhan 30 sent, inkasta oo, si daacad ah, qofna ma u diraa SMS maalmahan? Waa in la ogaadaa in ma haysatid hal xog oo bilaash ah. Waxaad awoodi kartaa caleenta qiimahiisu yahay 3 senti / MB, kan ugu horreeya 1.500 MB. Marka xadka la dhaafo, waxaad ku sii wadi kartaa daalacashada xawaare hoose oo aan kharash dheeraad ah lahayn.
Sida iska cad, daqiiqada aad ka saarto diiwaangelinta Movistar + Lite, waxaad lumineysaa khadka.
Waxaad daawan kartaa inta badan waxyaabaha ay ka kooban yihiin silsiladaha iyo filimada ay madashu ku siiso, marka laga reebo kubbadda cagta heerka sare ah. Haddii aad rabto inaad aragto League ama Champions League, waa inaad macaamiil taleefan oo joogto ah noqotaa oo aad kireysaa TV-ga ay ku shaqeeyaan iyada oo ay lahjad u dhigantaa Haddii aadan aheyn taageere kubada cagta ah iyo waxa aad jeceshahay waa taxane iyo filimaan si aad u daawato iPhone-kaaga ama ipad, waa ikhtiyaar ku habboon. Waxaad haysataa dhammaan barnaamijyada kanaalada # 0 iyo #Vamos, Movistar Series, Seriesmanía, Fox, TNT, Comedy Central iyo AMC. Waxaad haysaa VoD (fiidiyoow dalab ah) si loo dhasho: 300 taxane iyo dokumentiyo, ku dhowaad 300 filim iyo 60 barnaamijyo kala duwan.
Waxaa jira laba qaraar oo kaladuwan oo kuxiran qalabka: Ipad, HD (720p) iyo iphone, SD (576p). Waxay leedahay caqli gal: taleefannada gacanta tayada sawirku waa loo yareeyay isticmaalka xogta iyo xusuusta oo yar haddii aad horay u soo dejiso waxyaabaha ku jira qalabkaaga.
Soo dejiso oo gadaal ka daawo
Haa dabcan. Haddii aadan rabin inaad aragto waxa ku jira qadka ee dhibaatada isticmaalka xogta haddii aad isticmaasho 3G / 4G, waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijyada badankood markaad xiriir WIFI leedahay, si aad u daawato hadhow Waa inaad hubisaa in astaanta soo dejintu ay ka muuqato tabta waxyaabaha ku jira. Xaaladda taxanaha, astaanta ayaa ku taal tabta qayb kasta. Tab kasta oo shineemooyinka, silsiladaha, iwm ah, waxaad ku leedahay mid kale oo loo yaqaan «Si aad u soo dejiso», halkaasna waxaad ka heli doontaa dhammaan buugyaraha laga heli karo qadka.
Maskaxda ku hay in haddii aad xiratid fadhiga barnaamijka ama aad tirtirto, waxyaabaha laga soo dajiyay qalabkaaga ayaa baabi'i doona. Ka dib markaad bilowdo inaad daawato fiidiyow kasta oo la soo dejiyey, si toos ah ayaa loo tirtiri doonaa 48 saacadood ka dib.
Ipad iyo iPhone, haa. Apple TV, maya
Waxaa diyaar u ah ipad iyo iPhone, laakiin lama fahmin maxaa loogu diidayaa Apple TV. Mid ka mid ah sababaha waxay noqon kartaa in Movistar uu doonayay inuu diirada saaro isticmaalka bartaan kaliya aaladaha mobilada, dhanka kale, wuxuu sameeyay barnaamijka. labadaba telefishannada SmartTV (Samsung, LG iyo Android TV), iyo sidoo kale dhejiska Amazon Fire TV iyo ugu dhakhsaha badan sidoo kale Chromecast. Waxaan sidoo kale u maleyn karnaa inay tahay Apple kan doonaya inuu ilaaliyo barnaamijkiisa soo socda, dhanka kale, haddii uusan dhibaato ku qabin codsiyada dhammaan barnaamijyada ka jira Spain (Netflix, HBO, Amazon Prime, Rakuten TV, iwm.) sidaa darteed, maya tani maahan sabab sidoo kale. Caqli maleh.
La wadaag xisaabta
Movistar + Lite waxaa lagu ciyaari karaa laba aaladood isku mar. Halkaas ayaan ku dhaafayaa.
Movistar + Lite waa ikhtiyaar wanaagsan inaad awood u yeelatid inaad aragto waxyaabaha Movistar u gaarka ah (kubad la'aan) adigoon iska qorin khadka taleefanka. € 8 / bishii, oo leh qadka taleefanka gacanta oo bilaash ah, iyo awooda in lala wadaago koontada. Joogto la'aan. Si aad u daawato ipad ama iPhone waa qumman yahay. Looma heli karo Apple TV. Marka la eego xaddidan xaddidan, ma aha wax aad loogu talin karo inaad u isticmaasho telefishannada waaweyn. Laguma barbar dhigi karo tayada muuqaalka weyn iyo xallinta ee Amazon Prime ama Netflix ay ku siinayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Hadda waxaad shaqaalayn kartaa Movistar TV adigoon noqon macmiil Telefónica ah.
Bil ka dib, laakiin maqaal wanaagsan
Rakuten TV ma laha barnaamij loogu talagalay Apple TV, iyo maadaama aan nahay; Cirka midna
Sidaas oo kale natiijooyinka Q3 ee Apple. Adeegyadu waxay gaarayaan heerkii ugu sarreeyay abid